Abenzi beRadio Frequency PCB | I-China Radio Frequency PCB Factory & Abahlinzeki
Leli yibhodi lesifunda le-RF lesendlalelo eli-10 lemboni yezokuxhumana ngocingo. I-RF PCB ngokuvamile idinga ama-laminate anezici ezikhethekile zikagesi, ezishisayo, ezisebenza ngomshini, noma ezinye ukusebenza ezidlula lezo zezinto ezijwayelekile ze-FR-4. Ngeminyaka yethu eminingi yokuhlangenwe nakho nge-PTFE-based microwave laminate, siyaqonda ukuthembeka okuphezulu kanye nezidingo zokubekezelelana okuqinile kwezicelo eziningi.
Leli yibhodi lesifunda le-RF lesendlalelo eli-6 lomkhakha we-telecom. I-RF PCB ngokuvamile idinga ama-laminate anezici ezikhethekile zikagesi, ezishisayo, ezisebenza ngomshini, noma ezinye ukusebenza ezidlula lezo zezinto ezijwayelekile ze-FR-4. Ngeminyaka yethu eminingi yokuhlangenwe nakho nge-PTFE-based microwave laminate, siyaqonda ukuthembeka okuphezulu kanye nezidingo zokubekezelelana okuqinile kwezicelo eziningi.
IRogers 3003 RF PCB
Leli yibhodi lesifunda lesibili le-RF lomkhakha wezocingo. I-RF PCB ngokuvamile idinga ama-laminate anezici ezikhethekile zikagesi, ezishisayo, ezisebenza ngomshini, noma ezinye ukusebenza ezidlula lezo zezinto ezijwayelekile ze-FR-4. Ngeminyaka yethu eminingi yokuhlangenwe nakho nge-PTFE-based microwave laminate, siyaqonda ukuthembeka okuphezulu kanye nezidingo zokubekezelelana okuqinile kwezicelo eziningi.